आफैले तयार गरेको सेनापतिले नेतृत्व दावी गर्दा अग्रजले गर्व गर्नुपर्छ : गगन थापा - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
आफैले तयार गरेको सेनापतिले नेतृत्व दावी गर्दा अग्रजले गर्व गर्नुपर्छ : गगन थापा
Posted by Milap Subedi | १३ फाल्गुन २०७४, आईतवार १६:५३ |
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा कांग्रेसलाई बहुमत दिलाउने हो भने अहिले भएका पुराना नेता छेउ लाग्नुपर्ने बताएका छन् । आफूहरुले शुद्धिकरणको अभियान पनि अगामी दिनमा समृद्धि नेपालको अभियानमा कांगे्रसलाई नेतृत्वमा पु¥याएर रहेको नेता थापाले बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्र र प्रदेशमा छाया सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । छाया सरकारले वाम सरकारले गरेको काम कारबाहीका बारेमा निगरानी राख्ने र आवश्यक परे सल्लाह दिने र नराम्रो काम गरे, विरोध गर्ने हिसाबले कांग्रेसले छाया सरकार बनाउने निर्णय गरेको बताइएको छ । पार्टीभित्र शुद्धिकरणको अभियान युवा समूहले उठाइरहेको छ । यिनै विषयमा राज ढुंगानाले नेता थापासँग गरेको कुराकानी
कांग्रेसले बनाउन लागेको छाया सरकार के हो ?
छाया सरकारको कन्सेप्ट नयाँ होइन ?
जतिवटा मन्त्रालय छ, त्यत्ति नै छाया मन्त्री रहन्छन् ?
सरकारलाई निगरानी गर्न ?
यो विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको हो ?
संसद र सरकारमा प्रतिपक्षी ?
नेतृत्व तहमा यो विषयमा छलफल भएको छ ?
पार्टीभित्रका युवाहरुको पहलले छाया सरकार विधानमा परेको हो ?
प्रदेशमा पनि छाया सरकार हुन्छ ?
कांग्रेसमा जागरण किन चाहियो ?
पुराना नेता बिदाइ गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ । संसदीय दलका नेता पुरानै नेता दोहोरिदै छन् ?
पार्टीमा नयाँ पुस्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच रहेनछ ?
सभापति देउवाले पार्टीले हारेको छैन, व्यक्तिले हारेको भनिराख्नु भएको छ ?
कांग्रेसलाई अगाडि बढाउन तपाईंको मिसन के हो ?
ओली सरकार र कांग्रेसको सम्बन्ध कस्तो हुनेछ ?
सम्बन्ध तनावपूर्ण हुने संकेतका आधारहरु के हुन ?
राष्ट्रपतिले गल्ती गर्नुभयो ?
Previousआज देशभर वर्षा हुने संकेत
Nextकान्तिपुर अध्यक्ष सिराेहियासहित चार जनालाई उपस्थित हुन सर्वाेच्चको अादेश
देउवा र प्रचण्डले एकैसाथ भने- ‘एमालेको प्रस्ताव अव्यवहारिक’
१ पुष २०७३, शुक्रबार १२:४३
पार्टी नेतृत्वसामू सचिव सरुवाबारे पत्तै नपाएको माओवादी मन्त्रीहरुको गुनासो
२६ चैत्र २०७४, सोमबार १२:२१
“अब परिचालित होइन, सधैँ सक्रिय भएर आफैँ स्वचालित भइराख्नुहोस्” : गृहमन्त्री थापा
७ बैशाख २०७५, शुक्रबार ०६:२०
राप्रपाले बोलायो आकस्मिक बैठक, १८ सांसदलाई कारबाही गर्ने
६ भाद्र २०७४, मंगलवार ११:३०